Koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး Quick Start Guide - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Kid Scooter power-ကူညီ
ကိုယ်ပိုင် balancing Scooter
Koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး Quick Start Guide
ပေါ် 2.Battery အလင်းနှင့် Direction အဖွဲ့ညွှန်ပြချက်ကချိတ်ဆက်ရဲ့ဆိုလိုတယ်
ပြောင်းပြန်သည့်အခါ 4.Direction ညွှန်ပြချက်အနီရောင်ကိုဖွင့်
1. မှန်ကန်စွာဘက်ထရီနဲ့လှည့်ကွက် screw နှစ်ခု Install
အဝေးထိန်းပထမဦးဆုံးပေါ် 2.Turn ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွင့်။
အရှိန်အဘို့အရှေ့သို့ 3. Push ကို, ဘရိတ်များအတွက်သို့ပြန်သွားရန် Pull ။
4. စကိတ်စီးဘက်ထရီညွှန်းကိန်း,4အလင်းအိမ်အပေါ် 100%, ကိုဆိုလိုသည်
75%,2အလင်းအိမ် 50% ကိုဆိုလိုသည်နည်းလမ်းများအပေါ် 3. အလင်းများ, 1 အလင်း 20% လက်ဝဲဆိုလိုသည်။
သင့်ရဲ့ Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့ပါဝါအများကြီးရှိပါတယ်။ လုံခြုံစီးနင်းအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ:
သေးငယ်တဲ့နှစ်တိုးအတွက် button ကိုရွှေ့ပါ။
အဆိုပါစကိတ်စီးပေါ်တွင်သတိပေးချက်များ Read နှင့်ဤလက်စွဲစာအုပ်၏အစအဦးမှာ။
အခြားသတင်းများကာကွယ်ရေးကိရိယာ Highly အကြံပြုသည်။
ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပြောင်းလဲမှုဘက်ထရီ pack ကိုအားသွင်း
အားသွင်းတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုပြီးနောက်, GREEN မှဖွင့်အနီရောင်ဖြစ်လိမ့်မည် charger ကိုပေါ်အလင်း။ သငျသညျအပိုတစျခုအမိန့်ထုတ်လျှင်ဘက်ထရီပြောင်းလဲပါ။
အမြဲတမ်း screw နှစ်ခုတင်းကျပ်ဖို့သတိရပါ။
မှတ်ချက်: ဘက်ထရီအချိန်ကြာမြင့်စွာထားရှိဆိုပါကအပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆို, ပြီးတော့တစ်လတစ်ကြိမ်စည်ပင်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Daily သတင်းစာကို Maintenance
1. တစ်ဦးချင်းစီစီးနင်းအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုခိုင်မြဲစွာတင်းကျပ်နေကြသည်သေချာအောင်ဖို့ထရပ်ကားများနှင့်ဘီး Check ရှေ့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှည့်သေချာစေရန်ဘီး၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။
PCB ပျဉ်ပြားနှင့်ဘက်ထရီပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ damp အခါသမယမှသည်ကွာထားပါ။
3. သာလျှင်တစ်ဦး Koowheel အားသွင်းကိရိယာကိုသုံးပါ။ အခွားသောပြုချက်မရှိတဲ့အားသွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီအမြဲ 60Celsius ဒီဂရီအောက်မှာဘယ်မှာအပူချိန်သောအရပ်တို့ကိုမထားသင့်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှောင်ရှားရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုတဲ့ left သည့်အခါတိုင်း 2-3 လအတွင်းဘက်ထရီအားသွင်းပါ။
ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းတဲ့ဟာအားသွင်းပတ်ဝန်းကျင်သိမ်းဆည်းထားပါ, အ charging port ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန်ခံမတိုင်မီခြောက်သွေ့သေချာပါစေ။
2. ဘရိတ်များ၏အခြေအနေများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင် Get နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဘရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူသေချာပါစေ။
4. Beginners ချောမွေ့မျက်နှာပြင်လမ်းထဲမှာသတိနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့စီးသင့်ပါတယ်။
5. စိုစွတ်သောနှင့် Over-bumpy လမ်းကိုရှောင်ပါ။
လျှပ်စစ်စကိတ်စီး * 1 ဘက်ထရီ * 1
အသုံးပြုသူကို manual * 1 အားသွင်းကိရိယာ * 1
AC ပါဝါကြိုး * 1
LIMITED အာမခံ :
Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့အမေရိကန်, လက်ရာနှင့်ပစ္စည်းအတွက်ချို့ယွင်းချက်ကိုဖုံးသောဥရောပတိုက်တွင်နှစ်နှစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံအတွက်တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ဤသည်အလွဲသုံးစားမှု, အလွဲသုံးစားလုပ်, ပေါ့ဆမှု, မတော်တဆမှု, ဒါမှမဟုတ်ရေ၌စီးနင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ ဘက်ထရီအာမခံခြောက်လဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရေကြောင်း box ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါ။ အဆိုပါအာမခံမလုံလောက်သောထုပ်ပိုးအတွက်တင်ပို့ရာမှအပျက်အစီးမပါဝင်ပါဘူး။
သင်တစ်ဦး Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့စီးအခါတိုင်း, သင်တိုက်မှု, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သေခြင်းတရားသို့မဟုတ်အလေးအနက်ဒဏ်ရာအန္တာရာယ်နှင့်ကျရောက်ပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချစွာစီး, သင်လက်စွဲအားလုံးကိုသတိပေးချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါနှင့်လိုက်နာရမည်။
အမြဲတမ်းစီးသည့်အခါတစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်။ ရေ, စိုစွတ်သောမျက်နှာပြင်များ, ချော / မညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်များ, မတ်စောက်သောတောင်ကုန်း, အသွားအလာ, ဒါကိုတော့, သီချင်းများ, ကျောက်စရစ်, ကျောက်ဆောင်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်တစ်ဦးကျဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဆိုအတားအဆီးကိုရှောင်ပါ။ ညဥ့်စီးနင်း, ဆင်းရဲသောမြင်ကွင်းနှင့်အတူဒေသများနှင့်အသေးစားနေရာများရှောင်ကြဉ်ပါ။
သတိပေးချက်: လိုစိတျပျေါတှငျ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦး unpowered longboard များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်မှာအမြန်နှုန်းမှာ enviroments မှာ Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့စီးမထားပါနဲ့။ ကြိုးမဲ့ interferenceor ဘက်ထရီအမှား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျ footbraking သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့လျှောများကဲ့သို့စကိတ်စီးခြင်းနည်းစနစ်အပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့ရေအထောက်အထားမဟုတ်ပါဘူး။ Elec- tronics, ဝက်ဝံများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ရေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်အာမခံအောက်မှာမဖုံးဖြစ်ပါတယ်။
သတိပေးချက်: pinch အခကျြမြား,
ကွာခါးပတ်, မော်တာ, ဘီး, လူအပေါင်းတို့ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကနေလက်ချောင်း, ဆံပင်များနှင့်အဝတ်အစားကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ကိုလည်းအာမခံ voids ပေးသောအီလက်ထရွန်းနစ်အိမ်ရာနှင့်အတူတမ်မထားပါနဲ့။
သင် KOOWHEEL နေသောခေါင်းစဉ်: တာဝန်သိစီးနှင့်သင့်ပတ်လည်သူတွေကိုလေးစား, နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောအားကစားနှင့် mode ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးဖို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ
block 1, အမှတ် 1 ChiTian အရှေ့လမ်း, BaiShigang ကျေးရွာ, ChangPing မြို့, Dongguan စီးတီး 523570, တရုတ် (40000 ㎡)